We She Me: သမီး ၂ နှစ်ပြည့်အလှူ - ဆစ်ဒနီ ပဏ္ဍိတာရာမ
| FLAGS: Australia , Baby , Birthday
Andy Myint - 3/30/09, 11:28 PM
ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲ မှတ်ချက် ပြန်ရေးလိုက်ဦးမည်။ စာဖတ်သူတွေမှာလည်း Bravo အော်ရ၊ Congrats လုပ်လိုက်ရ၊ Happy Birthday ဆိုရနဲ့ မျက်နှာတောင် ပူတယ်။ Attention အရမ်း လိုချင်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဝေဒနာ ဒီဘလော်ဂါမှာများ အစပြုနေပြီလာတောင် ထင်ရောမယ်။ တိုက်ဆိုင်သွားလို့ပါ။ ကျေးဇူးလည်း တင်တယ်။ အားလည်းနာတယ်။
zizawa - 3/30/09, 11:49 PM
မင်္ဂလာမွေးနေ့ ပါ..မြတ်နိုးလေး။ သမီးလေးရဲ့ အရည်အချင်းကို ကောင်းကောင်း မြေတောင်မြှောက်ပေးနိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြီးရလို့ လူချွန်လူကောင်း တယောက်ဖြစ်မှာပါ။
အချိန်ကုန်ခံပြီး မှတ်တမ်းလေးတွေ စာဖတ်သူတွေအတွက် တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ၊ ကိုအန်ဒီ။
ကိုဇနိ - 3/31/09, 1:25 AM
ကိုအန်ဒီရေ ဘယ်လိုမှ စိတ်ထဲမခံစားပါနဲ့ ဘရာဗိုတွေ ကွန်ဂရက်တွေကလည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လိုအပ်လို့ လုပ်သင့်လို့ လုပ်ရတာကိုး..
အခုလည်း သမီးလေးအတွက် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးပါတယ်။
Kay - 3/31/09, 2:18 AM
မြတ်နိုးလေးကို happy Birthday လုပ်မလို့ဟာ..ကိုအန်ဒီ ကွန်မန့်ကို မြင်ပြီး ပြုံးချင်သွားတယ်။
Happy Birthday က Happy birthday ပါပဲ..
ဟစ်သိန်းချီတာလဲ.. ကွန်ဂရက် ပါပဲ..ပျော်စရာ မိသားစုလေးရေ-
Taungoo - 3/31/09, 2:48 AM
Happy Birthday ပါ နိုးနိုးရေ။
JulyDream - 3/31/09, 2:54 AM
အလှူဒါနအတွက် သာဓုပါခင်ဗျာ။ မွေးနေ့ရှင်အတွက်လည်း Happy birthday ပါ ခင်ဗျာ။ =)
ZT - 3/31/09, 3:09 AM
အားနာစရာ မလိုပါဘူး ကိုအင်န်ဒီရေ။ မွေးနေ့က မွေးနေ့ပါပဲ။ Birthday Wish လုပ်ပေးရမှာပေါ့။
ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ မြတ်နိုးရေ။ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဘဝလမ်းခရီးကို လျှောက်လမ်းနိုင်ပါစေ။
Moe Cho Thinn - 3/31/09, 9:05 AM
သမီးလေး မြတ်နိုးရဲ့ တိုးတက်မှု မှတ်တမ်းလေးကို ဖတ်ပြီး သဘောကျနေမိတယ်။
ဒီမြေ ဒီရေ ဒီဥယျာဉ်မှူးနဲ့တော့ ဒီပန်းကလေး လှပ မွှေးပျံ့မှာ အမှန်။ Happy Birthday thameelay yay..
နုသွဲ့ - 3/31/09, 10:17 AM
ဟယ် မရဘူး။ ဆုတောင်းမယ်ဆို တောင်းမှာပဲ။
သမီးလေးမြတ်နိုး ဖေဖေ၊မေမေ၊မောင်လေးတို့နဲ့အတူ ပျော်ရွှင် အောင်မြင် ငြိမ်းချမ်းသော ဘ၀ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်ပါစေ။
အန်တီ (မြန်မာဆန်ချင်ရင်တော့ ကြီးတော်ပေါ့လေ) နုသွဲ့
ပုံရိပ် - 3/31/09, 12:43 PM
သမီးမြတ်နိုး မွေးနေ့အလှူကို သာဓုခေါ်ပါတယ်။ စနစ်တကျလေး မှတ်တမ်းထားပေးတာ သဘောကျတယ်။ သူတို့လေးတွေ ကြီးလာရင် ပြန်ကြည့်လို့ ရတာပေါ့။
rita - 3/31/09, 12:47 PM
myat noe lay yayy,,
sin dan lar - 3/31/09, 1:32 PM
မင်္ဂလာမေါးနေ့ပါ.. သမီးလေး မြတ်နိုးရေ....။
Phyo Evergreen - 3/31/09, 1:38 PM
မြတ်နိုးတောင် ၂ နှစ်ပြည့်သွားပြီ.. အချိန်တွေကမြန်လိုက်တာ..။ ၂နှစ်ထက်ပိုထွားသလိုဘဲ..။
nu-san - 3/31/09, 2:12 PM
မနေ့ကတည်းက သမီးလေး မွေးနေ့ကို သတိရတယ်.. Happy Birthday လုပ်ဦးမလို့ member list တောင် ၀င်လိုက်သေးတယ်..:)
ဟိုရက်တွေကတည်းက ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး.. ကလေးလေး ၂ ယောက်ရဲ့ မွေးမှတ်တမ်းလေးတွေ တောင် သေချာပြန်ဖတ်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်.. ဘာလိုလိုနဲ့ သမီးလေးတောင် ၂ နှစ်ပြည့်သွားပြီ..
သမီးမွေးနေ့အတွက် အလှူလုပ်ထားတာ ဖတ်ပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာ သာဓုခေါ်မိပါတယ်.. ကြည်နူးတယ်.. ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလေး လှူရတော့ ပိုပြီး စိတ်သဒ္ဒါဖြစ်တာပေါ့.. :)
“ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ သမီးအလိမ္မာလေး ဖြစ်ပါစေ..”
Rita - 3/31/09, 4:09 PM
Happy Birthday ပါ ကလေးလေးရေ
မဇနိ - 3/31/09, 9:07 PM
သမီးလေးမြတ်နိုး ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေနော်။ သမီးလေးက ဆံပင်တွေရှည် ပိုလှနေတယ်။
၀ါဝါ - 4/1/09, 12:42 AM
Belated happy birthday to မြတ်နိုးလေး..
May Moe - 4/1/09, 3:30 AM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့ပါ မြတ်နိုးလေးရေ ။ အလှုကိုလဲသာဓု * ၃ ကြိမ်ခေါ်သွားပါတယ်နော်
မိုးကောင်းသူ - 4/1/09, 2:24 PM
ဒီဘလော့ကို အမြဲဖတ်နေကြပါရှင်။ အချိန်တွေက မြန်လိုက်တာ သမီးလေးတောင် နှစ်နှစ်ရှိသွားပြီကိုး။ သမီးလေး မြတ်နိုးရေ.........မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ။
sandra - 4/2/09, 7:09 AM
Happy Birthday ပါ သမီးလေး မြတ်နိုး။
သမီးလေးက ဘလော့ဂ်ဖတ် ပရိသတ်ရဲ့ မေတ္တာကို တပွေ့တပိုက်ကြီးရထားတာ ကျေနပ်စရာပဲ။
Thant - 4/2/09, 2:08 PM
Happy Birthday ကလေးလေး ... သမီးလေးရဲ့ တိုးတက်မှုမှတ်တမ်းလေးတွေ့တော့ သဘောကျမိတယ် ။ သမီးလေးရဲ့ မွေးနေ့ အလှူအတွက်လည်း သာဓုပါရှင် ။
Yu Wa Yi - 4/3/09, 4:18 AM
သမီးလေးမွေးနေ့ အလှူကို မုဒိတာ ပွားမိပါတယ်။
Phyo Wai Kyaw - 4/3/09, 12:28 PM
oh...time moves so fast! seem everything just happened at the last few months. just wanna say "Thar Du" for your donations. :)
ko9- 4/4/09, 6:13 PM
ုko andy & family,
1st of all HAPPY BIRTH DAY THAMEELAY
my daughter also coming 17 Apr will 8th B'day.my son also 20 Apr and going2yr.
cleaner - 4/12/09, 1:16 AM
အကိုေ၇......................... သဗ္ဗေ္ဗသတ္တာ ကမ္မသကာ .............ပါ ..ကြားဘူးလား...............................